कोरोना संक्रमित हेर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि नयाँ प्रविधि नेपाल भित्रियो – Health Post Nepal
कोरोना संक्रमित हेर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि नयाँ प्रविधि नेपाल भित्रियो
२०७७ असार ३१ गते १७:५६
सरकारी अस्पतालका लागि एएनएमएफले दियो तीन हजार थान एन९५ मास्क
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई एएनएमएफको १५ लाख सहयोग
कोरोना परीक्षण नमुना प्रेषण गर्न एएनएमएफको यातायात सुविधा, ५ सय पिपिई सेट सहयोग
एननएमएफको सहयोगमा अक्सिजन सहितको ८८ बेड सञ्चालनमा
आइसियु रहेका कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि नेपालमा पहिलो पटक नयाँ प्रविधि भित्रिएको छ। पावर्ड एयर पियुरीफाइङ एन्ड रेस्पिरेटोर (प्यापर) नामक प्रविधि प्रयोगबाट जोखिमयुक्त ठाउँमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गरिने जनाइएको छ ।
नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीबीच संक्रमण बढ्दै गएका कारण अमेरिका–नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनले उक्त प्रविधि भित्र्याएको हो। नेपालमा पहिलो पटक प्यापर भित्र्याउन सफल भएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा. भूपेन्द्र बस्नेतले जानकारी गराएका छन्।
सुरक्षाको दृष्टिकोणमा पिपिईभन्दा यो उच्चस्तरको रहेको डा. बस्नेत बताउँछन्। ‘आइसियुमा भएका कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि बढी प्रभावकारी हुन्छ,’ डा. बस्नेतले भने, ‘उक्त प्रविधिले स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउन सुरक्षा प्रदान गर्दछ।’
फाउन्डेसनले चीनबाट १२ पिस ल्याएको थियो। उक्त प्रविधिको एक पिसको १ लाखभन्दा बढी मूल्य पर्दछ। फाउन्डेसनले उपत्यकाका वीर, पाटन र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा २–२ पिस वितरण गरेको छ भने बाँकी उपत्यकाबाहिर पठाउने तयारी भएको डा. बस्नेतले जानकारी गराए ।
नेपालको सन्दर्भमा यो नयाँ प्रविधि हो। कोभिड–१९ का बिरामीलाई लामो समय आइसियुमा हेर्नुपर्ने डाक्टर वा नर्सका लागि सुरक्षा हिसाबमा बढी प्रभावकारी हुने डा. बस्नेतको भनाइ छ ।
‘पिपिई, माक्स लामो समय लगाएर काम गर्न असहज हुन्छ,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘प्यापरको प्रयोगमार्फत स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको साथ–साथै काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ।’
यो प्रविधि अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरूले आइसियुमा रहेका कोभिड संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। सुरक्षा दृष्टिकोण पिपिईभन्दा उच्च स्तरको हो। यस्तो प्रविधि भएमा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा बढी हुने उनको भनाइ छ। यो पटक–पटक प्रयोग गर्न सकिने छ।
उक्त प्रविधिको प्रयोग पटक–पटक गर्न सकिने त्रिवि शिक्षण अस्पतालको क्रिटिकल केयर (आईसीयू) विभाग प्रमुख डा. सुवास आचार्य बताउँछन्।
‘यो एउटा पिपिईको कम्पोडेन्ट नै हो। सुमुचित प्रयोग गर्न सके वषौँ सम्म टिकाउ हुन्छ, डा आचार्यले भने,‘ यो प्रविधि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको लागि बढी भरपर्दो रहेको छ।’
Tags: अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन, पावर्ड एयर पियुरीफाइङ एन्ड रेस्पिरेटोर